के तपाई ३६ वाला कम्मरलाई घटाएर २६ बनाउन चाहानुहुन्छ ? बिहानै पिउनुहोस् यो स्पेशल ड्रिंक – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Tips/के तपाई ३६ वाला कम्मरलाई घटाएर २६ बनाउन चाहानुहुन्छ ? बिहानै पिउनुहोस् यो स्पेशल ड्रिंक
आउनुहोस् घरमै बसी बसरी तौल घटाउन र कम्मर लाई पनि सानो बनाउन सकिन्छ त, महिलाहरुलाई आफ्नो मोटो भद्धा फिगर लाई लिएर चिन्ता लाग्छ । यस्तो अवस्थाामा महिलाहरु दिनरात बस् यही बारेमा सोच्छन् । कि आफ्नो बढेको पेटको बोसो कसरी घटाउने र आफ्नो फिगरलाई कसरी मेन्टेन गर्ने । यस्तो अवस्थामा महिलाहरुले आफ्नो काममा पनि फोकस गर्न सक्दैनन् । जसको कारणले उनीहरुलाई अरुको धेरै कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ ।
ड्रिंकको लागी आवश्यक सामाग्री, यो ड्रिंकको लागी तपाईले मात्र २र ३ चीज प्रयोग गर्नसक्नुहुनेछ । आउनुहोस् जानौँ यो बनाउनको लागी के चाहिन्छ त ?
१ कागती, २ १ इन्च अदुवा, १ चम्चा, २ गिलास पानी
विधी, सबैभन्दा पहिले एउटा कागतीलाई छोटो छोटो स्लाइसमा काट्नुहोस्, यसपछि अदुवा बोक्रालाई फाल्नुहोस् ताँकी कागती र अदुवा सजिलैसँग मिक्सरमा पिसिओस् ।
यसपछि यो आधम तयार हुन्छ, अब यस ड्रिंकलाई १ २ मिनेटको लागी राख्नुहोस्, यसपछि यसलाई छान्नुहोस् ताकी ड्रिंक पिउदा तपाईलाई कुनै अप्ठ्यारो हँदैन । ध्यान दिनुहोस् कि यसलाई चिसो भएपछि मात्र छान्नुपर्छ ।
अब तपाई सोच्नसक्नुहुन्छ कि आखिर यस ड्रिंक पिउदा के फाइदा हुन्छ त ? त्यसोभए जाननुहोस् कि कागतीले भद्धा मोटोपनलाई कम गर्छ । त वही यसको पानीले तपार्यको शररिलाई मेन्टेन गर्छ । भने वही अदुवाले तपाईको स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउँछ । यस्तो अवस्थामा यी सबै चिज एकै साथ मिक्स गरेर पिउँदा झन् तपाईको सबै समस्या छिनभरमै गायब हुन्छ ।
सुन्तलाको बोक्राको प्रयोगबाट मिल्छन् यति धेरै फाइदाहरु
यि ५ राशिलाई मंसिर १ गतेसम्म लाग्नेछ साढे ७ को दशा, यसरी पाउनुहोस छुटकारा